अपाङ्गता बालकलाई ह्विल चेयर सहित शैक्षिक सामाग्रि प्रदान
राजविराज, २२ भदौं ।
सप्तरीको मलहनमा गाविस ६ स्थित एकजना अपाङ्गता भएका बालकलाई बुधबार ह्विल चेयर सहित शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ ।
आप्mनो घरदेखी करिव ३ किलोमिटरको दुरीमा रहेका मुसहरनियाँ निम्म माध्यमिक विद्यालय मलहनमा ६ को कक्षा १ मा अध्ययनरत रहेका मलहनमा ९ धाँती बजार निवासी फुल महम्मदका ८ वर्षिय छोरा मो. सम्मसाद हिड्डुल गर्न नसक्ने कारणले उनलाई ह्विल चेयर वितरण गरिएको हो ।
सवल नेपाल राजविराज सप्तरी र सेभ द चिल्ड्रेनको साझेदारीमा संचालित स्पोन्सरशिप कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वेक्षण गरी पहिचान गरेर तिन महिना इसीसीडि ट्रान्जिस्नल क्लासमा भर्ना गरी विद्यालय जाने क्षमताको विकास गर्ने कार्य गरिएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रियकान्त चौधरीको अध्यक्षता एवं गाउँ वाल संरक्षण समिति मलहनमाका संयोजक मो. उल्फतको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा सवल नेपालबाट ह्विल चेयर १ सेट, कपी कलम सहित झोला १ थान हस्तारण गरी संयोजक मो. उल्फतले आप्mनो व्यक्तिगत तर्फबाट सवै सहभागिहरुलाई कार्यक्रममा खाजा खान ५ सय रुपैया र अपाङ्गता भएका बालक सम्मसादको लागी किताव, कपी र पोसाकका लागी नगद ११ सय रुपैया प्रदान गरिएको छ ।